IGcokama neziyalo ezijulile kuNtencane - Ilanga News
Home Izindaba IGcokama neziyalo ezijulile kuNtencane
IGcokama neziyalo ezijulile kuNtencane
Ubonge neLANGA ngokumgqamisa engaziwa
UMCULI kamasikandi uSenzo “Ntencane” Zondi
UYALWE ngamankentshane azofuna ukuzisondeza kuyena ngoba efuna ukumthela phansi njengoMroza Fakude wodumo lwengoma ethi, “Elamanqamu Namhlanje (Siyobulal’ uVan Damme)” umculi kamaskandi osemncane odle umhlanganiso “ehlukanisa unyaka” oKhozini FM ngoLwesihlanu ngengoma ethi, “Wawuthe-mbeni”.
USenzo “Ntencane” Zondi, odle umhlanganiso efika nje ekuculeni njengoba bekuyi-albhamu yakhe yokuqala le okukhethwe kuyona ingoma yakhe, ubongelwe ngozakwabo kumaskandi, babuye ba-mnika izeluleko.
UMthandeni “iGcokama Elisha” Manqele, uthe kukhona konke okwenzekile, ubonga amabhinca ngokuvota ngokwethembeka ngoba ukunqoba kukaNtencane kubeke phezulu lo mculo
Utshele ILANGA ukuthi ukunqoba lokhu kusho lukhulu emkhakheni kamasikandi nakuba kungasaqali, kodwa okwakhe kudlulele, kwazise uyafika endimeni.
“Ngiyafisa ukuthi uKhozi FM lusiyeke thina baculi esinamaqoqo abalandeli, kunikezwe ithuba abafana abancane oMzukulu, oDumakahle nabanye uma beshaye ingoma emnandi, kwazise akukho ukuhlukana phakathi kwabalandeli uma kuqokwe bona.
“Leli thuba ngelabafana abancane, abangekho ezimpini zomculo, okungekho umuzi okuthiwa akangeni kuwona. Kumasikandi akekho umculi osephumelele njengami, ngiwakhile umuzi kababa, nginezimoto, nginezigidi zemali, ngizishayile izingoma ezingamanoni, ngakhoke kasisekho isidingo somona,” kusho uMthandeni.
Uthe ufuna ukweluleka uNtencane ngokuthi aziphathe kahle, ahloniphe, konke akwenzayo akholelwe kuyena ngqo ngoba babengekho abantu ngesikhathi eqala lo mculo.
“Kukhona abazoqhamuka bazishutheke kuyena befuna ukumlahla phansi njengoMroza. Kumele athathe izinqumo zempilo ezihambelana naye, angenzi izinto ngokujabulisa abathile ngoba emculweni kunobuqili,” kusho iGcokama.
UBheki “Bhekihonga” Ngubane, wakwabo kaSibongiseni “Mjikijelwa” Ngubane, iChalaha likaShafuza, (ongasekho) uthi ukunqoba kukaNtencane kubathoko-zise kakhulu ngoba lude ukhalo abaluhambe naye.
“Kusukela kusakhankaswa be-simeseka. Lokhu besikwenza egameni lokuthi le nsizwa iphekwe yiChalaha futhi isagqamisa ushuni negama lalo,” kusho uBheki.
UNtencane uthi kusenzima ukukholwa uma ebona igama lakhe likhule kakhulu ngalolu hlobo esikhathini esincane ezimele emculweni.
“Bonke abangesekile ngemali yabo, bethokoziswa wumculo wami, ngiyazibongela kubona. Ngeke ngishiye ngaphandle uKhozi ngethuba olungiphe lona ngisa-zabalaza neLANGA elingibhale ngingaziwa, ngaze ngavelela kakhulu,” kusho uNtencane.
Utshele leli phephandaba ukuthi okwamanje kayikho imali ayitholile ngokunqoba kwakhe.
Ngokwesitatimende seSABC, ithe odle umhlanganiso uzohlomula ngo-R50 000, ophume isibili athole u-R30 000 kuthi owesithathu athole u-R20 000.
UNtencane unqobe ngamavoti awu-433 142 ebashiya le kude abanye abaculi abeqhudelana nabo.
Lo mculi kuzokhumbuleka ukuthi ubengelinye lamagidangoma kaMjikijelwa naye owayeshaya ingoma eseqophelweni eliphezulu, ebalwa nabaculi abayikhulumisayo intambo.
Previous articleOwoKhozi nengoma kamaskandi ebhingqayo
Next articleI-SANTACO IKHATHAZEKILE NGOKUSWELA AMA-SANITISER